एक Permalink के हो? ट्र्याकब्याक? पोस्ट स्लग? पिंग? | Martech Zone
बिहीबार, सेप्टेम्बर 21, 2006 बुधबार, अक्टोबर 8, 2014 Douglas Karr
म आज एक शानदार लन्चियोनमा थिएँ जहाँ समस्त इन्डियानापोलिस भरि धेरै बुद्धिमानी मार्केटरहरू थिए। प्रत्येक to देखि weeks हप्ता हामी नयाँ (वा लोकप्रिय) व्यापार वा मार्केटिंग पुस्तक छलफल गर्न भेला हुन्छौं। यो अफिस र विवरणबाट बाहिर निस्कन र केही 'ठूलो तस्बिर' सोचमा फर्कने राम्रो अवसर हो। केही व्यक्तिहरू प्रिन्ट र मिडिया हुन्, अन्यहरू ईन्टरनेटमा जानकार छन्। आज मैले सुनेको एउटा टिप्पणीले केहि भ्रमित पार्यो ब्लगिar जर्जोन। मैले यसको केहि ई-मेट्रिक्स गाईडमा समावेश गर्न सक्दछु जुन म लेख्दै छु, तर यो ब्लग प्रविष्टि लायक छ, जे भए पनि:
एक Permalink के हो?
एक परमलिंक तपाईंको पोष्टको लागि 'स्थायी लिंक' हो। यो यस्तो सुविधा हो जुन तपाईंको ब्लगमा सक्षम गर्न आवश्यक पर्दछ, यसले प्रयोगकर्तालाई सामग्रीको प्रत्येक प्रविष्टिको लागि विशेष एकल, पाठ, वेब ठेगानामा सूचित गर्न अनुमति दिन्छ। उदाहरण को लागी, E-मेट्रिक्स लेख मा माथि उल्लेखित को एक permalink छ:
एक ट्र्याकब्याक के हो?
ट्र्याकब्याकहरू शक्तिशाली छन् तर आजकल स्पामर्सद्वारा अधिक र अधिक दुरुपयोग हुँदैछन्। उनीहरू कसरी काम गर्छन् भनेर यहाँ छ ... एक ब्लगरले तपाईको पोष्ट पढ्छ र तपाईको बारेमा लेख्छ जब उनीहरू प्रकाशित गर्छन्, तिनीहरूको ब्लग सूचित तपाईंको ब्लग एक जानकारी ट्र्याकब्याक ठेगानामा पेस गरेर (पृष्ठको कोडमा लुकेको)।
यसले तपाइँलाई देख्न मद्दत गर्दछ कि कसैले तपाइँको पोष्टको बारेमा अनलाइन लेखिरहेको छ। यो एक अचम्मको उपकरण हो किनभने यो गैर-इन्टुभ्युटिभ हो र यो कसैलाई सूचित गर्ने माध्यम हो जुन तपाईले उनीहरूको बारेमा लेख्नुभएको छ वा उनीहरूको ब्लग मार्फत तपाईंको जानकारी साथ पार गरिरहेको छ। सधै ट्र्याकब्याकहरू प्रयोग गर्नुहोस् जब तपाईं कसैको पोष्ट वा ब्लगको बारेमा चर्चा गर्नुहुन्छ। यो शिष्ट छ यदि तपाईं उनीहरूको बारेमा लेख्न जाँदै हुनुहुन्छ भने, तपाईंले कम्तिमा तिनीहरूलाई प्रतिक्रियाको अवसर दिनुहोस्।
अवश्य पनि, यो स्प्यामरहरूको लागि सुनको खानी हो। तिनीहरूले सफ्टवेयर प्रयोग गर्छन् जसले वास्तवमा तपाईंको साइटलाई URL मा पिंग गर्दछ जुन उनीहरू तपाईं भ्रमण गर्न चाहन्छन् र तिनीहरूले वास्तवमै तपाईंको बारेमा लेख्दैनन्। यस कारणका लागि, हामी अगाडि बढ्यौं र उनीहरूलाई हाम्रो WordPress सेटिंग्समा अक्षम गर्‍यौं।
पोष्ट स्लग के हो?
एक पोस्ट स्लग एक पोष्ट को लागी एक पाठ संदर्भ हो। माथिको उदाहरण प्रयोग गरेर, पोष्ट स्लग हो ब्लगिंग-ए-मेट्रिक्स। यस पोष्टको पोस्ट स्लग 'ब्लग-जरगन' हो। यदि तपाईंसँग तपाईंको पोष्टको अन्त्यमा नम्बरहरू छन् भने, तपाईंले आफ्नो ब्लगमा Permalink सक्षम गर्न आवश्यक छ। यसले तपाईंको साइटमा प्रत्येक पोष्ट र पृष्ठको लागि पाठ्य, श्रेणीगत URL हरू निर्माण गर्न अनुमति दिन्छ। यो खोज इञ्जिनहरूका लागि लाभदायक हुन सक्छ ... तपाईंको पोष्ट स्लगहरूमा कुञ्जी शब्दहरू प्रयोग गर्न मद्दत गर्न सक्दछ! तपाई आफैले यो हरेक पटक लेख्ने बारेमा चिन्ता लिने आवश्यकता छैन, यद्यपि ... तपाईंको ब्लगिging सफ्टवेयरले तपाईको लागि यो गर्नु पर्छ। कहिलेकाँही म तिनीहरूलाई आजको पोष्ट जस्तो लामो शीर्षकसँग थोरै छोटो बनाउन चाहन्छु!
(पिंगब्याकका लागि छोटो) एक पटक नेटवर्कमा दुई कम्प्युटरहरू बीचको सञ्चारहरू परीक्षण गर्नको लागि प्रयोग गरिएको, अब 'पिंग्स' ब्लगि blogको लागि विकसित भएको छ। यदि तपाइँले तपाइँको ब्लगमा पिंगहरू सक्षम गर्नुभयो भने, तपाइँको ब्लगले स्वचालित रूपमा प्राप्तकर्ता सेवालाई पिंग गर्ने छ जब तपाईले आफ्नो ब्लगमा प्रकाशित गर्नु भएको छ भने उनलाई थाहा दिनुहोस्। यसले खोजी ईन्जिनलाई सामग्रीको लागि तपाइँको साइटलाई 'क्रल' गर्न अनुमति दिनेछ र सोही अनुसार तपाइँलाई राख्नुहोस्। म त्यहाँ services वटा सेवाहरू पिंग गर्दैछु ... तिनीहरू दोहोरिन सक्छन तर म त्यससँग ठीक छु।
यी सेवाहरू, परिणाम स्वरूप, त्यसपछि ट्र्याक गर्नुहोस् र मेरो सामग्री तिनीहरूको खोज इञ्जिनहरूमा राख्नुहोस् साथै तिनीहरूलाई अरूमा बुझाउनुहोस्। निश्चित गर्नुहोस् कि तपाईले आफ्नो साइटमा पिंगहरू सक्षम गर्नुभयो!
अधिक जानकारीको लागि, विकिपेडिया: ट्र्याकब्याक, Permalink, पिंग
टैग: ब्लग जार्गनब्लग टेक्नोलोजीशब्दजालPermalinkपिंगपोस्ट स्लगSlugTrackbackएक permalink के होपिंग के होपोष्ट स्लग के हो?एक स्लग के होट्र्याकब्याक के होएक permaink के होपिंग के होपोस्ट स्लग के होएक ट्र्याकब्याक के हो
ICRA समर्थन गर्नुहोस् र तपाईंको साइटमा सामग्री लेबल गर्नुहोस्
सेप्टेम्बर १,, २०११ 22::2006० अपराह्न
म प्रयोग गर्छु http://pingomatic.com/ ती पिंग सेवाहरू addys थप्नको लागि मेरो WP विकल्पहरूमा।
सेप्टेम्बर 23, 2006 मा 10: 40 AM
Yvonne: PingGoat एक स्वचालित पिंग ठेगाना छ जुन म WordPress मा राख्न सक्छ?
सीनरोक्स: धन्यवाद! हो, हामीले यी सुझावहरू र युक्तिहरू लेख्न जारी राख्नै पर्छ। मान्छेहरु लाई थाहा हुनु पर्छ!
टेकजेड: पिंगोमेटिक पोस्टमा उल्लेख गरिएको पिंग ठेगानाहरू मध्ये एक हो… के तपाईं यसलाई म्यानुअल पनि प्रयोग गर्नुहुन्छ?
सेप्टेम्बर १,, २०११ 23::2006० अपराह्न
होईन, तर तपाईं बुकमार्कको रूपमा निश्चित ठेगाना बचत गर्न सक्नुहुनेछ, र त्यसपछि जानुहुन्छ जब तपाईं पोस्ट गर्नुभयो। यसलाई म्यानुअल रूपमा हेर्नको लागि यसले एक सेकेन्ड लिन सक्दछ। 🙂
सेप्टेम्बर 24, 2006 मा 8: 34 AM
Yvonne, म यसलाई मैन्युअली पिंग गर्दैछु, अब होइन 😉 त्यो मेरो सेवा हो जुन मैले WP विकल्पहरूमा पिंग सूची समावेश गर्नु अघि प्रयोग गर्‍यो।
अक्टूबर २१, २०१ at २:०13 बिहान
के अन्य कारणहरूले ट्र्याकब्याकहरू प्रयोग गर्न सम्भव छ? म उही ब्ल्गमा अनौठा कुञ्जी शब्दहरूको साथ औषधीहरूको सन्दर्भमा धेरै ट्र्याकब्याकहरू पाइरहेको छु, त्यसैले यो मलाई संदिग्ध देखिन्छ। मैले तिनीहरूलाई मेटाउँदै छु। यो बिन्दुमा पुग्यो जहाँ यो साह्रै कष्टकर थियो, र यति धेरै घट्दै गइरहेको छ कि मैले मेरो ट्र्याकब्याक विकल्प मेटाउनुपर्‍यो। यद्यपि तपाईं यसको बारेमा "शिष्टाचार" भएको कुरा गर्नुहुन्छ तर म आश्चर्यचकित छु कि यो कसरी दुरुपयोग हुनेछ, किनकि यो मेरो ब्लग साइट (जुन मेरा विद्यार्थीहरूको लागि सांस्कृतिक अध्ययन साइट हो) को लागी हो।
हो, त्यो ट्र्याकब्याक स्प्याम हो। तपाईं यो लड्न सक्नुहुन्छ, यद्यपि। यहाँ छ थप जानकारी.
जनवरी १, २०१ 29 १२::2007 अपराह्न
मेरो बहिर्गमन ट्र्याकब्याकहरू केहि समयको लागि मेरो WordPressp.com ब्लगमा भ broken्ग भएको छ।
के कसैलाई तेस्रो पार्टी उपकरण थाहा छ म स्वचालित रूपमा ट्र्याकब्याक उत्पन्न गर्न ब्लगमा चलाउन सक्छु?
त्यो चाखलाग्दो छ - मैले यसभन्दा अघि त्यस्तो घटनाको बारेमा सुनेको छैन। के तपाइँसँग तपाइँको xMLrpc.php ठाउँमा छ? के तपाइँ पिंग आउट गर्दै हुनुहुन्छ? (यसले उही फाइल प्रयोग गर्दछ)। यदि तपाईं चाहानुहुन्छ भने तपाईं उनीहरूलाई परिक्षण पनि गर्न सक्नुहुनेछ… मलाई लाग्दछ कि तपाईंले फारम मार्फत तपाईंको पृष्ठमा डाटा पोस्ट गर्नुभयो भने काम गर्दछन् भनेर।
जनवरी 30, 2007 मा 1: 12 एएम
यो केहि चीज हो जुन विशिष्ट WP.com प्रयोगकर्ताहरूको लागि छेक्छ।
मैले परीक्षण गरिसकेको छु र यस्तो देखिन्छ कि मेरो ट्र्याकब्याकहरू काम गरिरहेछन् यदि म मैन्युअल्ली पठाउँछु भने, यो स्वचालित पिंगब्याकहरू हुन् जुन मेरो लागि टुक्रिएको छ।
जनवरी १, २०१4१२::2008 अपराह्न
यस पोस्ट डग को लागी धन्यवाद! तपाईं एक ठूलो मद्दत हुनुहुन्छ!
जनवरी १, २०१ 11 १२::2008 अपराह्न
केही सर्तहरूको व्याख्या यस पोष्टको लागि धन्यवाद। मलाई निकै मदत गर्नुभयो! अब मलाई थाहा भयो।
सस्तो SSL प्रमाणपत्रहरू
तपाइँको ब्लगले प्रमाणित गर्‍यो कि तपाइँ सफल ब्लगर हुनुहुन्छ। भर्खरै परिचय गरिएको सर्तहरू जस्तै पोस्ट स्लग र पोस्ट पिंग साझा गर्नका लागि धन्यबाद।